ကျွန်တော်နှင့် ဖရဲမ တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဦးည | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » ကျွန်တော်နှင့် ဖရဲမ တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဦးည
ကျွန်တော်နှင့် ဖရဲမ တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဦးည
Posted by အရင့်ရောင် on Aug 10, 2012 in Ideas & Plans | 30 comments
မင်္ဂလာပွဲက ရှင်းရှင်းလေး…မနက်မှာ နှစ်ဖက်မိဘအိမ်နီးနားချင်းရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ.
မှတ်မှတ်ရရ ကျနော်တို. မင်္ဂလာဦးညအကြောင်းကိုပြောပြရဦးမယ်..
ကျွန်နော့်သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘဲဥ၊မောင်ပေ၊ဖတ္တီးကပ်တို့ကတော.စပ်ဖြဲဖြဲ မျက်နှာပေးတွေနဲ.လေကန်နေကြတုန်းလေ။(ဒါတောင် အင်ဇာဂီ တို့ ရဲစီ တို့ အုပ်စုကအမူးလွန်ပြီး စောစောပြန်သွားလို့နော်)
အိပ်ခန်းထဲဝင်လိုက်တော. သနပ်ခါးလေးပါးပါးလူးထားတဲ.ဖရဲမကို ကုတင်စွန်း
`တော်တော်ဆိုးတဲ.ကောင်တွေ…´ ကျနော်ကပြောလိုက်သော်လည်း ဖရဲမထံမှ
` ဟုတ်….ရပါတယ်..ကိုကို ´
` အိပ် စို. နော် ´
ကျနော်က ခေါင်းအုံးပေါ်သို. အိပ်ချလိုက်သော်လည်း ဖရဲမကလုံးဝမလှုပ်…..
` အိပ်ကြစို.လေ ဖရဲမ(အသဲလေး)´
` ဟုတ်ကဲ. ကိုကို ´
` ဖရဲမလေး…..ကိုကို.ကိုပြောစရာ ရှိလို.လား…´
` မရှိပါဘူး……ဟင့်အင်း ရှိတယ်ကိုကို….မနက်ဆွမ်းကပ်တုန်းက…ဘုန်းဘုန်း က
`အား…လိမ်မာလိုက်တဲ. ကိုကိုမိန်းမ ကွာ..တကယ့်မယားကောင်းလေးဘဲ ´
` မနောက်ပါဘူး ကဲ…ကန်တော. ကန်တော. ´
`ကျနော်က ထထိုင်ရင်းပြောလိုက်သည် ´
ချစ်ဇနီးလေးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကြည့်နေမိသည်။ဖရဲမက လက်အုပ်လေးချီ မျက်စိလေးမှိတ်ပြီး
ပါးပြင်ကသနပ်ခါးကလည်း အခုမှခြောက်သွားဟန်တူသည် ရနံ.သင်းသင်းလေး
ထွက်နေသည်၊ခါးကလေးကိုမတ်၍ လက်အုပ်ချီထားသော သူလေး၏ ကိုယ်ဟန်ကောက်ကြောင်း
ကျနော့်မျက်နှာကို မိုးပြီးကြည်.နေသောဖရဲမကိုပြုံးပြုံးလေး မြင်လိုက်ရသည်။
` ကိုကိုအိပ်နေတာခလေးလေးလိုဘဲ ဖရဲမတောင်ကန်တော့ပြီးသွားပြီ´
`အင်း ဟုတ်တယ်…. ကိုကိုအိပ်ပျော်သွားတယ် ´
` ကိုကို ´
` ပြောလေ..ဖရဲမ ´
` ကို ကိုး………. ´
`ဖရဲမ ကိုပဲတသက်လုံးချစ်ရတော.မယ်နော်…သိလား..ကိုကို ´
`ဟုတ်ပါပြီ ချစ်လို့ပဲယူကြတာပေါ. နော်´
` ကိုကို က..ဖရဲမကိုလေ အနိုင်လည်းမကျင်.ရဘူး အပြစ်လည်း
ကျနော် မသိခဲ့သောသူမနှင့် သူမ မသိခဲ့သော….ကျနော်တို.ပေါင်းခဲ.ကြချိန်မှာ
ကျနော်အိပ်နေတုန်း ရှစ်နာရီလောက်မှာ ဖရဲမရဲ့အမ၀မ်းကွဲလင်မယားလာလည်
ကြတာလေ၊သူ.တို.နဲ.အတူမျောက်မူးလဲ အမွှာနှစ်ကောင်လည်းပါလာခဲ.တာလေ၊ ကျနော်.
`မေမေရေ မေမေ ဟိုအခန်းထဲကဘဘအိပ်နေတာဖင်ကြီးပေါ်နေတယ်
ဖင်ကလည်းမဲမဲပြောင်ပြောင်ကြီး…….ဟီးဟီး ရီ ရတယ်..´
`တယ်……..ဒီကလေးတွေ ..ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလည်း..တော်စမ်း ´
ဘယ်ပြောရဲပါ့မလည်းတစ်ခါ ကျနော်က ကြက်ဟင်းခါးသီးဟင်းချက်လို.ကြိုက်တဲ.အကြောင်းလေး
တာရိုတယ်ဗျ၊ညားပြီးကာစတနေ.မှာ ကျနော်အိမ်ပြန်သွားတော. ဖရဲမကျနော့်ကိုရှောင်ဖါယ်ရှောင်
` ဖရဲမလေး(အသဲလေး) မင်းဘာဖြစ်နေတာလည်း..ကိုကို.ကိုဘာများမကျေနပ်လို.လည်း ´
အရင့်ရောင် အရင့်ရောင် has written 56 post in this Website..
View all posts by အရင့်ရောင် →
ကလေး..ကလေး နဲ့ 
နာတော့ မျက်လုံးထဲမှာ သူတို့ကို မိန်းကလေးတွေလို့ မြင်နေပြီ… ဘိုလိုရုပ်မရဲ…
ဖရဲရေ နင်ယောကျာ်းမယူဘူးဆိုအခုတော့ ဘယ်လိုဖြစ်ရပြန်တာလဲ
ဖရဲမကအတင်းကို ယူပါဟြေနေတော့ ယူလိုက်တာ
အော် ဖရဲမ ဘွလည်း သနားစရာပါ .. ဗလဗိုင်ကိုလိုက်နေတာပဲ ဟိုလူနဲ့ညား ဒီလူနဲ့ညား ……… ခက်တာက ညားတဲ့သူတွေကလည်း ယောကျာ်းတွေချည်းပဲ ………
ဖရဲမ က ဘယ်သူနဲ့ညားလို့တုန်း……….
ဖရဲသီးလည်း ထပ်ခြမ်းကွဲရှာပေါ့.. ဟိ
အွန် …. ဖရဲမ .. ဖရဲမ .. မွေးရကျိုးမနပ်လိုက်တဲ့ သမီး ……..
တသက်လုံး လူဖြစ်အောင် ကျွေးမွေးလာတဲ့ မိဘကိုတောင် နေ့တိုင်း ရှိခိုးပြီး အိပ်ရမှန်း မသိခဲ့ပဲ …… လောလောလတ်လတ် ယူထားတဲ့ ယောကျာ်း ကို.. (သူ့လုပ်စာတောင် တပြားမှ မစားရသေးပဲ ) ရိုသေပြနေလိုက်တာ ….. မပြောလိုက်ချင်ဘူး ……… အမိုက်မ …… ။
ကျွန်တော့်ကို လက်ထပ်တာလို့ ဖရဲမ ဟြေတာပဲ
သား သမီးတွေများ …..မွေးရကျိုးတကယ်မနပ်လိုက်တာနော် … မိဘထက် … သွေးမတော် သားမစပ်တဲ့ လူကို ပိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးဖြစ်နေကြတာ .. အံ့သြမိပါတယ် … ။ ရင်သွေးဆိုတာ ရတနာမဟုတ်ပဲ … ရတာနဲ့ ရင်နာအောင် လုပ်မယ့် ဟာလေးတွေဆိုလျှင် … မမွေးတာပဲကောင်းတယ် …
သီချင်းတွေထဲမှာလဲ ရှိပါတယ် …. ဘာတဲ့ … အားကိုးထိုက်တဲ့ မောင်ရယ် မေချစ်တယ် မိဘထက် ပိုတောင် ပိုသေးတယ် တဲ့ ……. ကဲ ကြည့် …. နားထောင်ရင်းတောင် ထရိုက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ် … ။ နောက်တစ်ပုဒ်မှာလည်း ကြားမိပါသေးတယ် …. ။ ဖေဖေမေမေထက် မင်းက ပိုချစ်ပြမလား ဆိုတာ ……… ။ ဘယ်လို တေးရေးတွေက … အမြီးအမောက်မတည့် ကျေးစွပ်ဖို့ စာတွေ စပ်လိုက်လည်း မသိဘူး … ။ နားထောင်ရတာတော့ လုံးဝ ကန့်လန့်ပဲ ကိုရင့်ရေ … ။
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ ဖရဲရယ် ငါဖြင့်နင့်ကို ယောင်္ကျားလေးထင်တာ အခုတော့ ယောင်္ကျားလေးပါပဲ။ အိမ်တွင်း မှု တော်ချက်က ကိုရင့်ပြောမှသိတယ်။
လေးစားပြီး အလေးပြုသွားပါကြောင်း ကိုရင့်ရေ ။ လူပျိုကြီး အတွေ့ အကြုံ တော်တော် များနေပြီထင့် သူ့စိတ်ကူးယဉ်နေတာ လေ။ အဟတ်အဟတ်
ကုတင်ခြင်ထောင်စုံစွာ …..(တွန့်နေတဲ့ကိုတိန်းသန် လေသံဖြင့်)
ဖရဲသီးလေး ဆီက စကားပြန်မရတော့ပါလားနော်…
အိမ်မှာ အိမ်မှု ကိစ္စလုပ်နေရတာနဲ့ မအားရှာဘူးလေ………..
နောက်နေ့မှ လည်လည် လွှတ်ပေးမယ်နော်………ဟိဟိ
ko khin kha says:
အဟဲ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကတွေ့လိုက်တဲ့ သစ်သီးရောင်းနေတာပြောတာနော်။
ဆိုင်ကယ်ပေါ်က သစ်သီးနဲ့မှ လာတွေ့နေတယ်နော်
အော် … အရင့်ရောင်ရယ် စိတ်ကူးယဉ်တာတောင်
ဖရဲမရဲ့ သနခါးပါးပါးလေးနဲ့ ဘုရားကန်တော့နေတဲ့ပုံကို မျက်စိထဲမြင်ကြည့်လိုက်တာ
ဖရဲမ က အတွင်းသိ အဆင်းသိမို့ ပစ်စလက်ခပ် ယဉ်လိုက်တာလေ
ရင်ခုန်တာက အသက်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဟယ်
စိတ်ပျိုမှ ကိုယ်နုတာလေ ;-)
ကျုပ်တို့လို အဖွားကြီးတွေက ရင်မခုန်ရတော့ဘူးလား
ခုံရုံးတင်ပစ်လိုက်မယ်နော် လူ့အခွင့်ရေး ပိတ်ပင်မှု့နဲ့
pan pan chit says:
သင်းမလဲ တစ်နှစ် ဘယ်နှခါယောက်ျားယူနေလဲမသိဘူး
ဟယ် ဒီသတင်းစိုးကြီးလွဲပါရစေ ငါ့ဆုတောင်းတွေမပြည့်ခဲ့ပါ တကယ်ကြီးလား ဟင် ဖရဲကလည်း ဟုတ်လို့လားမသိ ဘာမှလာမပြောသေးဘူး စိတ်ဆိုးရဘူးနော် နောက်တာ ။။
အော….ဖရဲမ ပျောက်နေပါဒယ် အောင့်မေ့တာ..အရင့်ရောင်လက်ချက်ကိုး….
ဒီလို လက်ဆမျိုးဆို ဒေါက်တာချက်တို့ အကြိုက်မျိုးနေမှာ..
စွထုတ်စာ (စထစ) လို့မှတ်ပါတယ်နော့…
ဘာ ဘာ ဘာ
ရွာထဲမဝင်နိုင်တာကို ညည်းက အခွင့်ကောင်းယူတယ်ဟုတ်လား
ရေငါးရေ တိုတိုဖရဲကို အဲလိုပြောနေတယ်
ပျောက်နေတဲ့  ဖရဲမတောင်ထွက်လာရပြီ
ဖရဲရေ မကြာမကြာလာခဲ့ ပါဦး